“Tsy Zava-tsy Manjary Na Aretina Akory Izahay”: Hoy Ireo Bilaogera Mpitia Ny Mitovy Taovam-pananahana Aminy Ao Tajikistan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Febroary 2014 7:50 GMT
Vakio amin'ny teny Español, فارسی, Italiano, English
“Nofaritana ho toy ny helo ho an'ireo lehilahy mifanambady” i Tajikistan, firenena iray mpandàla ny nentin-drazana, ao Azia Afovoany, izay 95 isan-jatony ny vahoakany no Miozolmana. Kanefa ny media sosialy dia namela betsaka ny vondrom-piarahamonin'ireo olona nanova na mitovy taovam-pananahana (LGBT) nefa mifanambady ao amin'io firenena io ho afa-miteny manohitra ny fankahalana azy ireo.
Vao haingana no nisy andian-panadihadiana sy tantara tanaty bilaogy mikasika ny olan'ireo LGBT ao Tajikistan. Tamin'ny faran'ny Janoary, namoaka tantara ny Radio Ozodi (Radio Free Europe/zana-pandaharanan'ny Radio Liberty Tajik) mikasika ireo lehilahy mifanambady ao amin'ny firenena, tamin'ny fiteny Rosiana sy Tajik. Avy eo, tany ampiandohan'ny Febroary, ny gazety mpiseho isan-kerinandro amin'ny fiteny Rosiana, Avicenna namoaka [ru] vaovao momba ny fandidiana voalohany natao hanovàna taovam-pananahana tao amin'ny firenena. Niteraka fanehoankevitra an-jatony ireny tantara ireny, fankahalàna ireo olona mitovy nefa mifanambady no ankamaroany, miaraka aminà fanehoankevitra manosoka ny hoe “aretin-“tsaina na “fahotàna mahafaty” ny fifanambadian'olona mitovy taovam-pananahana.
Nivoatra nankany amin'ireo tambajotra sosialy sy ny tontolon'ny bilaogy ny adihevitra nanomboka teo. i Drugoi [Hafa], bilaogera mpiaro ny zon'ireo olona mitovy nefa mifanambady dia nandefa tantara iray tamin'ny Radio Ozodi sy Avicenna tao amin'ny Blogiston.tj, niteraka fanehoankevitra maro mifamahofaho sy lahatsoratra ho valin-kafatra. Eto ambany ny topimaso kely amin'ilay adihevitra izay naka toerana tao amin'ilay bilaogy.
Namaly ny lahatsoratr'i Drugoi [ru] mikasika ny fiainana mihidy iainan'ireo olona mitovy fa mifanambady ao Tajikistan, Ant nanamarika hoe [ru] :
Olona voaozon'Andriamanitra ireny olona ireny
Rustam Gulov nanoratra hoe [ru]:
Rehefa kary dia aoka ho antsoina hoe kary. Tsy teny “siantifika” ny hoe “fifanambadian'ny mitovy taovam-pananahana” ; noforonina ho entina mampiroborobo an'io fahavetavetana io fotsiny io! Mbola toy izany ihany koa ho an'ny teny hoe “vitsy an'isa ara-pananahana” sy “gay (lehilahy mifanambady)”.
Amin'ny tena izy dia misy teny tsotra sy mivantana kokoa – pidarast, gomik, pedik, sodomit, [kunte] [teny fanivaivàna amin'ny Rosiana sy Tajik mitovy dika amin'ny an'ny Anglisy hoe “faggot” – fako aman'ahitra]
Tsy tokony harovana ry zareo! Efa nandrary vato ny làlana ho an'ireo zoophiles (olona mankafy miray amin'ny biby), sy ireo karazan'olona necrophiles (olona mankafy firaisana ara-nofo amin'ny razana) ary hatramin'ny pedophiles (mpanolana ankizy)!
Mir Aziz niombon-kevitra hoe [ru]:
Tena izany mihitsy, Rustam. Tsy tokony hanampy an'ireny marary saina ireny isika!!! Tokony hofongorina izy ireny dia misaina in-droa ny olona vao hiditra ho anatin'io fahavetavetana io!
Emir namaly hoe [ru]:
Mir Aziz, fa maninona no ilainao ny loha? Ho amin'ny herisetra ve? Na angamba ho amin'ny teny faneva feno fanavakavahana??? Eritrereto izay, Miantso fanavakavahana mibaribary ianao ary herisetra atao amin'ireo olombelona hafa! ..
Mpamaky hafa no nanampy hoe [ru]:
Azoko tsara hoe aiza no misy anareo, ry zalahy, ary miombon-kevitra amin'ny ankamaroan'izay nolazainareo aho. Saingy eto no olana. Manana lehilahy mifanambady isika, singa ao anaty fiarahamonintsika izy ireny ary manafina ny fironana [ara-pilan'ny nofo] ananany ry zareo. Maro amin'izy ireny no voatery manambady, izay mahatonga ny vehivavy novadiany ho tsy hanam-pahasambarana ihany koa. Dia inona no tokony hataontsika manoloana ny olona tahaka izany? Tsy araka ny maha-olombelona loatra ny hanery azy ireny hijanona anaty fahanginana sy hanafina ny marina amin'ny olona rehetra mandritry ny androm-piainan-dry zareo.
Novalian’i Drugoi [ru] ireo kiana ireo:
Mitratrevatreva daholo isika rehetra. Efa voaràra sy nenjehana foana nandritry ny an'arivon-taona ny fifanambadian'olona mitovy taovam-pananahana. Nisy mihitsy aza ny fanenjehana ireo olona mitovy nefa mifanambady ho toy ny nanao heloka bevava. Tsy efa lesona iray tsara ho anareo ve ny tsy nisian'ny fiovàn-javatra na inona na inona tamin'ity fanenjehana ity? Hatrany ampahaterahany ny olona sasany no efa nanana fironana ara-pananahana hafa amin'ny an'ny rehetra, ary tsy azo ovàna izany. Ary ho an'ireo “mpitsabo rarin-tsaina” milaza ny fifanambadian'olona mitovy taovam-pananahana ho aretin-tsaina, olona adala tsy ampy fahalalàna izy ireny.
Nanoso-kevitra ny sasany tamin'ireo mpisera ety anaty aterineto ny amin'ny tsy tokony hiheverana ireo olona mitovy nefa mifanambady ho toy ny ampahany ao anatin'ny fiarahamonina Tajik. Nanoratra i [tj] Firdavs hoe :
O rey olona ô, miangavy, aza ampiasaina ny teny hoe “Tajik” sy “Tajikistan” rehefa miresaka an'ireny fako aman'ahitra ireny ianareo. Sady tsy Tajiks ireny no tsy avy ao Tajikistan. Sa izay biby rehetra izao dia tokony ho antsointsika koa hoe Tajik?
Nanaiky izany i [tj] Benom :
Tohanako [tanteraka] i Firdavs. Tsy Tajik ireny fako aman'ahitra ireny. Tsy olombelona akory aza izy ireny.
Nisy vondrona iray ahitàna ireo mpiserasera ety anaty aterineto nanameloka ity adihevitra be mikasika ny olan'ny olona mitovy nefa mifanambady ao Tajikistan ity. Tao anatin'ny tantaran'ny Radio Ozodi, ohatra, marobe ireo mpamaky no nangataka tamin'ireo mpamoaka lahatsoratra mba hanàla ilay izy tsy ho ao amin'ny tranonkala mba “hitahirizana ny endriky” ny firenena. Ao amin'ny Blogiston.tj, Vali ibn Vali niteny hoe [tj] :
Atsaharo itony adihevitra itony, ry zalahy a ! haram [fahotàna, maloto] daholo ireo fako aman'ahitra ireo. Rehefa misy olona manohana an-dry zareo na mikarakara azy, raisina ho haram koa io olona io.
Ho valin'ireo kiana maromaro sy soso-kevitra hoe tokony “hotazonin'ireo olona mpitia ny mitovy taovam-pananahana aminy ho azy ihany ny azy” ary tokony hanaraka fitsaboana aretin-tsaina ry lerony, nanoratra i [ru] Drugoi hoe :
Tokony hahatsapa ianareo fa hoe misy izahay ; tsy zava-tsy manjary na aretina akory izahay; olombelona tahaka anareo ihany izahay. Ary manana zo hiaina finaritra.